Iyo Apple Watch pamwe neAirPods vari kukohwa huwandu hwakawanda mukutengesa | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch pamwe neAirPods vari kukohwa huwandu hwakawanda mukutengesa
Hausati watenga yako Apple Watch parizvino? Uri kumirira yako yuniti yeiyo AirPods mahedhifoni? Iyi mibvunzo miviri inogona kunge isinei newe, asi zvinoenderana nezvakatsanangurwa naApple mumusangano wekupedzisira musangano wekutaurirana, Zvinotaridza kuti izvi zvigadzirwa zviviri zvinotora keke maererano nenhamba yekutengesa.
Kunyangwe zviri zviviri zvidiki zvigadzirwa, ivo vari kuve bhenji mukati meApple izvo ndizvo kutora kumusoro iro boka rezvigadzirwa zvakanyorwa mukati meApple ecosystem se «Vamwe».
Wedu watinoshanda naye Jordi Giménez akatiratidza mhedzisiro yemari yeApple yakapihwa nguva pfupi yadarika uye akatiudza kuti Apple inoramba ichinakidzwa sei nehutano hwakanaka hwemari uye ndeyekuti zvakare ine mibairo inokatyamadza. Zvino, chimwe chezvinhu icho Tim Cook pachake akasimbisa mumusangano uno zviri mukukosha kuri kutengeswa kweApple Watch neAirPods.
Isu takave neApple Watch pakati pedu kweanopfuura makore maviri uye hazvisi zvakavanzika zvemumwe kuti wachi ino inoramba iine kubudirira kumwechete nekutanga kwayo. Apple haina kumira kuve nekutengesa mazano ayo anozvichengeta mukuonekera nekutanga iyo yechipiri yakagadziridzwa vhezheni, iyo Series 2, ichivandudza yekutanga neiyo Series 1 uye kuvhura iyo zvedongo Apple Watch Edition pamwe neApple Watch Nike + kana iyo Apple Tarisa Hermès. Kune zvese izvi isu tinofanirwa kuwedzera kusaperera kwezviitiko kusvika pamabhanhire matsva, zvinoreva kuti varidzi vechigadzirwa havaregedze kuisa mari mukuziva nemuchina mukuru mumwe chete.
Kana zviri zveAirPods, Apple haigadzikane kudzikisira sisitimu yechigadzirwa ichi, izvo zvinoita kuti tifunge izvozvo kutengesa kuri kuve kwakakwira kwazvo, nekuti isu hatifunge kuti Apple mbeveve zvakakwana kuti isatore mukana wemamiriyoni ekutengesa aingaite. Kune izvi zvese ndosaka takakubvunza mibvunzo miviri pakutanga kwechinyorwa chino, mibvunzo inoratidza kuti zvigadzirwa zviviri izvi zvisati zvaratidza kugona kwazvo zvizere uye nekuuya kweshanduro huru inotevera yeApple Watch pamwe ne yakagadziridzwa vhezheni yeAirPods 2, Apple iri kuzorova rekodhi yepamusoro maererano nekutengesa.
Iwo maApple Watch neAirPods zvikwata zvinofanirwa kufara kwazvo nebasa rakaitwa uye ndine chokwadi chekuti mukati memapoka eApple zvese kurumbidzwa kwavari, ndiko kuti, vasingakanganwe chokwadi chekuti haufanire kudzikisira kurinda kwako uye kuti makwikwi vavariro vanoshuvira kubudirira zvakaenzana.
Isu takapedza chinyorwa nekuyeuchidza vateveri kuti mazuva mashoma apfuura isu takadzokorora kuti Apple yakachinja mutemo wayo wewarandi yeApple Watch isingapi chimwe chinhu hapana chakaderera pane rimwe gore kupfuura iro raive riripo, saka zviri pachena kuti vanhu veCupertino vane chokwadi kwazvo kuti chigadzirwa chakanyatsogadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch pamwe neAirPods vari kukohwa huwandu hwakawanda mukutengesa
Sangana neye elago L4 Mira, dhizaini yekumisikidza yako MacBook
Tim Cook akati Apple iri kuisa mari nechisimba muMacs